Daawo: Hooyo Qaali Oo Si Qiiro Leh Uga Jawaabtay » Axadle Wararka Maanta
Daawo: Hooyo Qaali oo si qiiro leh uga jawaabtay
By Abdiwahab Ahmed	 Last updated Sep 13, 2021
Muqdisho (Axadle)-Hooyo Qaali Maxamuud Guhaad oo dhashay Ikraan Tahliil Faarax ayaa ku gacan-seyrtay guddiga uu caawa Farmaajo u magacaabay baaritaanka kiiska gabadheeda, iyadoo sheegtay in kiiskaas ay baaritaankiisa u daba fadhiyaan guddigii uu magacaabay Ra’iisul Wasaare Rooble.
“Kuma qanacsanin, mana aqbali doonno guddiga uu madaxweyne Farmaajo u xil-saaray baritaanka kiiska Ikraan, waxaan ku qanacsanahay maxkamadda ciidamada oo aan horay ugu gudbinay dacwadda kiiska gabadheyda,” ayey tiri Hooyo Qaali Maxamuud.
Waxay sheegtay in hadii Farmaajo uu sii wado is hortaaga baaritaanka kiiska gabadheeda ay u qaadanayaan in isagu uu bixiyey amarka lagu afduubtay.
“Hadii is hortaagaan uu ka waantoobi waayo waxaan Madaxweynaha ka gudbineynaa dacwad, dal iyo dibadna waan ka dacwey doonaa Farmaajo,” ayey hadalkeeda ku sii dartay hooyo Qaali.
Ugu dambeyntii maamada ayaa sheegtay inay ku kalsoonyihiin Ra’iisul Wasaare Rooble oo cadaaladda kiiskaas ay isaga ka sugayaan, “Umadda Soomaaliyeed oo markii horaba i garab taagneed waxaan leeyahay arka gardarada Farmaajo iyo labadaas nin ay igu hayaan.”